Qowleysatada Waqooyi Soo Dhigatay
Goosashada gobolada waqooyi waxey qeyb ka ahayd dagaalkii siyaasadeed ee u dhexeeyey Soomaalida iyo Ethiopia. Soomaalidu waxey ku guuleysatey himiladeedi ahayd in Eritrea ay ka go`do dalka Ethiopia. Tigreydu Soomaalida waxba uma yareysan in waqooyiga ay ka goyso dalka Soomaaliyeed. Siyaasadaasuna waxey u suurtoobi weysey damaca Mareykanku ka leeyahay dalka soomaaliyeed. Siyaasadii isbedelka badneyd ee ku timid Soomaalida xiligii Siyaad Barre dalka xukumayey waxey dhalisay inuu dhumo xiriirkii Soomaalida iyo dalalkii gumeysan jirey. Soomaaliduna waxey sidaas ku noqotay dal aan dibeda laga lahayn.
Koox gooni u goosataa oo ka kooban ganacsato, jabhad iyo siyaasiyiin u badan rag xun ayey ahayd taladeedu in gobolada waqooyi laga afduubo dalka intiisa kale. Kooxdaas wuxuu qaabkeedu isu rogey markii uu yimid maamulkii Cigaal kuwo u abaabulan qaab beleed sida maafiyada u howlgasha. Si loo helo taageerada dadka ayaa kooxdaas waxaa lagu dhameystiray ka midnoqoshada odeyada dhaqanka iyo aqoon yahano isir raaca.
Siyaasiyiintii cuslaa ee waqooyiga ayaa midba mar maalin cad gooni geed loogu xiray iyadoo kooxdaas u adeegsaneyso canshuurta maamulka falaagadaas ay uga xoogsato waqooyiga . kooxdaas ka dowladeysa waqooyiga waxey quursi geliyeen C/Raxmaan Tuur, Cumar Carte, Janaraal Jamac M. Qaalib, Xadraawi, Salemaan Gaal iyo Ahmed Silaanyo.
Waxaa isi soo taraya dareen xoogan oo laga qabo kooxdaas awoodii waqooyiga marooqsatay. Xariga iyo laaluushka ayaa ah waxyaabaha ay u adeegsadaan afduubka ay ku heystaan xoriyadii waqooyi. Rabitaanka kooxdaas ayaa waxey ka turjumeysaa doorashadii ay dhowaan ku quusiyeen siyaasigii rug cadaaga ahaa ee Silaanyo oo qaaday sida loogu tala galay.
Waxaa cadeynaya waqooyi inuusan ka jirin maamul madax banaan sida kooxdaas ay u caburineyso siyaasiyiinta garaadkoodu balaaran yahay iyo dadka wadanka u dhashay oo aan kooxdaas fikradooda raacsaneyn. Kol haddii Berbera aysan dowlad ka soo dhismeeyn waa maxay ujeedada loo majaxaabiyey halgankii Burco ay u soo gashay SNM ama xoreynta waqooyi. Waxaa cad markii horeba in la kala ujeedo ahaa oo qasadka dadkuna ahaa in la tuuro xukunkii dulsaarna, kooxduna ay daneyneysey in degaanka waqooyi loo beecgeeyo Adisa Ababa. Waxay kooxdaas cabsi weyn ka qabtaa haddii qoloyinka wadaniyiintaa ee u badan galbeedka waqooyi ay awooda siyaasadeed gacanta ku dhigaan inuu imaanayo isbedel siyaasadeed oo keeni kara in laga tanaasulo wixii aan soconeyn.
Maamulada Maxlalka u ah Maqale:GUJI....
Eber Waxba kama Bilowdaan GUJI...
Cabashadii Silaanyo iyo calaacalka Janaraal Qaalib waxey muujineysaa waxa Xamar looga goostay iyo waxa cidlada la isugu tagey ineysan midna ahayn talo maskax badan looga baaraan degey. Kooxdaas qowleysatadaa dadkii iyo dalkii waa ay kala goyn waayeen ee ma cirka mise bada ayey lagelin riyadooda dhalanteedkaa. Waxaan dheereyn in wakhti dhow uu waqooyiga ka bilowmayo iska horimaad hubeysan haddii kooxdaas ay ku sii adkeysato muquuninta ama caburinta dadka soo badanaya ee siyaasadoodu u jaleecdo midnimda dalka Soomaaliyeed.
Soomaalida markii ay midowdey oo ay gumeysiga ka qaadatey xoriyada, dalka waxaa si xora u wada joogey qoloyinkii dhaliyey gobonimada iyo kuwii raacsanaa gumeysiga, oo cidna dalka lagama musaafirin. Maanta oo kooxdaas ay ku edeyneyso koofurta inay ka tirsaneyso cadaalad darro, in ay iyadu maanta kula kacdo xoriyad ka qaad dadkeeda u dhashay waqooyiga, oo si ku dhisan qaab isticmaar ay dalkooda uga musaafuriso waa arrin soo dedejineysa soo banaan bixida qowleysatanimada kooxdaas ay isgu qarinayso doonista dadka ay u qabaan ismaamulid madaxbanaan.
QORAALADII HORE EE DR.SACIID